musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » USA Kuputsa Nhau » Basa idzva rekudzivirira Pasi rakatangwa neNASA uye SpaceX
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • nhau • vanhu • chengetedzo • Space Tourism • Technology • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau
Chikamu chimwe chete cheNASA yakakura yekudzivirira yepuraneti, DART ichakanganisa inozivikanwa asteroid isiri kutyisidzira Pasi.
NASA's Double Asteroid Redirection Test (DART), yekutanga-yakazara-pasi rose mishoni yekuyedza tekinoroji yekudzivirira Nyika kubva kunjodzi dzeasteroid kana dzekometi, yakatangwa neChitatu na1:21 am EST pamhepo. SpaceX Falcon 9 roketi kubva kuSpace Launch Complex 4 East kuVandenberg Space Force Base muCalifornia.
Chikamu chimwe chete che NASA's hombe planetary defense strategy, DART - yakavakwa nekutungamirirwa neJohns Hopkins Applied Physics Laboratory (APL) muLaurel, Maryland - ichakanganisa asteroid inozivikanwa iyo isiri njodzi kuNyika. Chinangwa chayo ndechekushandura zvishoma kufamba kweasteroid nenzira inogona kuyerwa nemazvo uchishandisa materesikopu epasi.
DART icharatidza kuti chitundumuseremusere chinogona kufamba chakazvimirira kuenda kune chakananga asteroid uye nemaune kubonderana nacho - nzira yekutsauka inonzi kinetic impact. Muedzo uchapa data rakakosha kubatsira kugadzirira zvirinani kune asteroid inogona kuunza njodzi kuPasi, kana ikangowanikwa. LICIACube, CubeSat inotasva neDART yakapihwa neItalian Space Agency (ASI), ichaburitswa isati yaitwa neDART kutora mifananidzo yekukanganisa uye gore rinozobuda rechinhu chakadzimwa. Angangoita makore mana mushure mekuita kweDART, chirongwa cheESA (European Space Agency) Hera chichaita ongororo dzakadzama dzeasteroids ese ari maviri, ichinyanya kutarisisa gomba rakasiiwa nekudhumhana kweDART uye kunyatso tsigisa huwandu hweDimorphos.
"DART iri kushandura ngano dzesainzi kuti dzive chokwadi chesainzi uye chiratidzo chehunyanzvi hweNASA uye hutsva hunobatsira vanhu vese," akadaro. NASA Mutungamiri Bill Nelson. "Pamusoro penzira dzese dzeNASA dzinoongorora denga nepasi redu repamba, tiri kushandawo kuchengetedza imba iyoyo, uye bvunzo iyi ichabatsira kuratidza imwe nzira inogoneka yekudzivirira pasi redu kubva kune ine njodzi asteroid kana munhu akaonekwa yakananga kuNyika.”
Na2:17 am, DART yakaparadzana kubva pachikamu chechipiri cheroketi. Maminitsi gare gare, vafambisi vemishoni vakagamuchira yekutanga spacecraft telemetry data uye vakatanga maitiro ekutangisa chitundumuseremusere panzvimbo yakachengeteka yekuendesa masolar arrays ayo. Anenge maawa maviri gare gare, chitundumuseremusere chakapedza kubhedhenura kwakabudirira kwemaviri acho, 28-mafiti-kureba, kubuda-kunze kwesolar arrays. Ivo vanozogonesa zvese zviri zviviri spacecraft uye NASA's Evolutionary Xenon Thruster - Commerce ion injini, imwe yematekinoroji akati wandei ari kuedzwa paDART kuti ishandiswe mune ramangwana pamisheni yemuchadenga.